काठमाडौं, ४ साउन । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पाँच सय ६५ वटा स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको छ । चार महिना लामो अध्ययन र छलफलपछि आयोगले स्थानीय तहको संख्या प्रस्ताव गरेको हो । आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि पाँच आधार तय गरेको छ । आयोगका सदस्यसचिव डा. हरि पौडेलका अनुसार भौगोलिक क्षेत्रअनुसारको जनसंख्या वितरण, क्षेत्रफल, जिल्ला
मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मतदान गर्ने
२९ असार, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी आलीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको समर्थन गरेको छ । मधेसी मोर्चाको बुधबार बसेको बैठकले संघीय गठवन्धनमा आवद्ध ४२ सभासदको हस्ताक्षर बुझाउने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीले बुधबार नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । अनलाइनखबरबाट साभार
२९ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि दुबै दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको सामना गर्छु भनेपछि सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । कांग्रेस र माओवादीलाई तीन सिट भएको
सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कांग्रेसको निर्णय
२९ असार, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ । राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने उसको निर्णय छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बुधबार विहान बसेको बैठकले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकपछि सतेचक ईश्वरी न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भनिन्, अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा
सरकारले विश्वास गुमायो, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छः कांग्रेस
२८ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकार अल्पमतमा परिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनु पर्ने बताएको छ । सत्ता साझेदार माओवादीले मंगलबार मात्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । र, नयाँ सरकार गठनको प्रयास सुरु भएको छ । तर, माओवादीले दाबी गरे जस्तो उसका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न पत्र नदिएको कांग्रेस
– डा‍‌‍‍. सुरेश अाचार्य / संसदबाट विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै सरकार परिवर्तनको चर्चा व्यापक भएको छ । माओवादी नेता प्रचण्डले प्रधानमन्त्री के पी ओलीसँग सत्ता मागेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गठवन्धनका नाममा धेरै किचकिच नसहने चेतावनी प्रचण्डलाई दिएका छन् । सत्तारुढ दुई घटकबीच शुरु भएको यो तिक्तताको अन्त्य भनेको यो सरकारको पतन नै हो
२८ असार, काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकार छाड्ने निर्णयप्रति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ । विगतमा तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहे पनि संविधान जारी गर्ने क्रममा भएको १६ बुँदे सहमतिपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सम्वन्ध सुमधुर बनेको थियो । त्यही सिलसिलामा प्रचण्डकै प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष केपी
२८ असार, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यससँगै ओली सरकार संकटमा गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन्। स्रोतका अनुसार प्रचण्डले ‘मैले (सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने) निर्णय गरेँ’ भनेर पार्टीका नेताहरुले सन्देश पठाएका
नेपालबाट दिल्ली जाँदै गरेको बस दुर्घटना, पाँचको मृत्यु
२८ असार, काठमाडौं । नेपालबाट भारतको नयाँ दिल्लीतर्फ जाँदै गरेको यात्रु बस उत्तरप्रदेशको बहराइच जिल्लामा दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा ३० जना घाइते भएका छन् । गएराति ट्रकसँग ठोक्किएर बस दुर्घटना भएको भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईले जनाएको छ । दुर्घटनास्थल बाँकेको नेपालगञ्जबाट ६० किलोमिटर टाढा पर्दछ । दुर्घटनाग्रस्त बस नेपालको कुन